The Latest: Zimbabwe blast 'terrorism,' vice president... | Israel News
Daily Mail: The Latest: Zimbabwe blast 'terrorism,' vice president...
2018-06-24 (241 Days Old)Total Views: 121 | Last 7 Days: 2
HARARE, Zimbabwe (AP) - The Latest on aftermath of blast at Zimbabwe president's campaign rally (all times local):5 p.m.One of Zimbabwe's vice presidents is...
FOX: Female Viking warrior's remarkable grave sheds new light on ancient society
FOX: Woman allegedly told ‘all vegans should be punched in the face’ by bank employee after applying for loan
FOX: As suicide rates rise, college students band together in unprecedented effort
FOX: Lefties turns on anti-Trump CNN after network hires ex-Jeff Sessions spokeswoman Sarah Isgur
CBS: Trump meets with Austrian chancellor at White House
CBC: Shapovalov eliminated by 50th-ranked Mikhail Kukushkin in France
CBC: 2019 NHL trade deadline tracker
ABC: WATCH: Pres. Trump denies interference in Michael Cohen investigation
ABC: WATCH: Oscars 2019: And the limo goes to...
A ‘cowardly act:’ Authorities say explosion was assassination attempt on Zimbabwe leader. Zimbabwe’s president was unscathed Saturday by an explosion at a campaign rally that state media called an attempt to assassinate him, later visiting his two injured vice presidents and declaring the “cowardly act” will not disrupt next month’s historic elections. >>
Explosion 'targets' Zimbabwe president. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa says the blast was an assassination attempt. >>
It was inches from me: Zimbabwe president escapes.... President Emmerson Mnangagwa said `it is not my time´ after the blast at a Zanu PF event in Bulawayo. >>
The Latest: Zimbabwe blast 'terrorism,' vice president says. The Latest: Zimbabwe blast 'terrorism,' VP says; any 'scared' candidates to get protection >>
The Latest: Zimbabwe blast ‘terrorism,’ vice president says. The Latest on aftermath of blast at Zimbabwe president’s campaign rally (all times local): >>
Zimbabwe blast rocks stadium in apparent assassination attempt on President. Zimbabwe's government is calling an explosion Saturday an assassination attempt on President Emmerson Mnangagwa, who was holding a campaign rally at a stadium. >>
Zimbabwe election to 'to go ahead as planned' after blast. President Mnangagwa says voting will take place on 30 July despite an apparent attempt to kill him. >>
Zimbabwe leader calls assassination attempt 'cowardly act'. Zimbabwe's president was unscathed Saturday by an explosion at a campaign rally that state media called an attempt to assassinate him, later visiting his two injured vice-presidents and declaring the "cowardly act" will not disrupt next month's historic elections. >>
Zimbabwe police says 49 people injured in Saturday's blast. HARARE, June 24 (Reuters) - Zimbabwean police said on Sunday 49 people were injured in the explosion at President Emmerson Mnangagwa's political rally on... >>
Zimbabwe police says 49 people injured in Saturday's blast at president's rally. HARARE (Reuters) - Zimbabwe police said on Sunday 49 people were injured in the explosion at President Emmerson Mnangagwa's a political rally on Saturday, with the number expected to change. >>
Zimbabwe police says 49 people injured in Saturday's.... HARARE, June 24 (Reuters) - Zimbabwe police said on Sunday 49 people were injured in the explosion at President Emmerson Mnangagwa's a political rally on... >>
Zimbabwe president survives blast at campaign rally, calling it 'cowardly act'. Zimbabwe's president was unscathed after an explosion at a campaign rally that state media called an attempt to assassinate him, later visiting his two injured vice-presidents and declaring the "cowardly act" will not disrupt next month's historic elections. >>
Zimbabwe rally blast injured 41: minister. A blast that rocked a rally in which Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa narrowly escaped unscathed injured at least 41 people, including his two... >>
Zimbabwe rules out state of emergency after blast at rally. Zimbabwe rules out state of emergency after blast at president's campaign rally injures 41 >>
Zimbabwe Vice President says Saturday's explosion was.... HARARE, June 24 (Reuters) - Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga said on Sunday an explosion that narrowly missed harming the president after a... >>
Zimbabwe vows vote to go ahead despite rally blast. The blast that rocked a ruling party campaign rally in which Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa narrowly escaped unharmed, has plunged the country into... >>